Garyaqaan (Jaamuus) oo lagu toogtay Garoowe | Wardoon
Home Somali News Garyaqaan (Jaamuus) oo lagu toogtay Garoowe
Garyaqaan (Jaamuus) oo lagu toogtay Garoowe
Faah faahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya toogasho xalay lagu dilay mas’uul ka tirsanaa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo ku sugnaa bartamaha magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal.
Dilka oo ay fuliyeen kooxo hubeysan ayaa waxaa loo geystay kaaliye ka tirsanaa maxkamadda darajada koowaad ee Ciidamada Puntland.
Marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray, Garyaqaan Maxamed Maxamuud Cabdi oo ku magac dheeraa (Jaamuus), sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah.
Wararka ayaa sheegaya in marxuumka toogasho lagu dilay, xilli uu ku sugnaa agagaarka hoyga uu ka dagan yahay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in kooxihii ka dambeeyey falkaasi ay goobta isaga baxsadeen dhacdada kadib.
Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Garoowe oo gaaray meesha ay wax ka dhaceen ayaa baaritaano kooban ka sameeyey halkaasi, balse ma jiro weli wax faah faahin oo saraakiisha ciidamadu ay ka bixiyeen dilkaasi iyo howl-gallada daba socday intaba.
Previous articleGuddiga iskaashatooyinka oo la ogaaday in ay Al-Shabaab katirsan tihiin
Next articleSAWIRRO Somaliland oo abaalmarin siisay Duuliye Axmed Dheere
Ganacsade Daahir Maxamed Gaab oo caawa lagu dilay Muqdisho
Taliye Indha- Qarshe ” ciidamada gadoodka sameeynaayo waa ay lumi doonaan”...